Sida looga badbaado duufaanta | Saadaasha Shabakadda
Monica Sanchez | | Khayraadka
Tornado waa ifafaalooyin cimilo oo layaableh, laakiin sidoo kale waxay noqon karaan kuwo wax dumiya. In kastoo EspanaWaqtigan xaadirka ah, kaliya kuwa EF0, EF1, EF2 iyo qaar ka mid ah EF3 ayaa la arkay, taas ma iloobi karno khatartu marwalba way jirtaa.
Marka, aan ogaano sida looga badbaado duufaanta.
3 Xagee loo aadayaa?
Suuragal ma ahan in horey loo sii ogaado halka duufaanta xigta ay sameysaneyso. Sidaa darteed, si fudud ayey nooga yaabi kartaa marka aan dibadda joogno. Maxaan ka yeelnaa kiiskan?
Haddii aan baabuur wadno, waxa aan sameyn doonno waa inaan isku dayno inaan ka helno hoy u dhow. Haddii aynaan helin, waxaan hubin doonnaa inaan haysano suunka - wax aan xusuusano inuu qasab yahay - waana foorarnaa si jidhkeenu u yaraado sida ugu macquulsan, gacmahana madaxa ayaan saaraynaa.
Haddii aan soconno, waa inaan helnaa gabbaad dhulka hoostiisa ah, sida bohol.
Haddii aan doonnida ku soconno, waxaan u dhaqaaqi doonnaa dhinaca dhinaca bidix ee gacmaha biyaha. Haddii aan aragno inay ku dhaceyso doonta, waxaan u boodboodi doonnaa badda tan iyo markii aan sidan ka gaabsaneyno dhaawac.
Hadday nagula yaabto gudaha dhismaha ama gurigeenna, waa inaan tagnaa qol aysan daaqado lahayn oo sida ugu macquulsan ugu dhow guriga dhexdiisa. Haddii uu jiro guri hoostiisa, wax badan ayaa ka sii fiican. Waxaan ku foorari doonnaa dhulka oo madaxayaga ayaan ku dabooli doonnaa gacmaha iyo gacmaha.
Xagee loo aadayaa?
Waxaa jira aagag gaar ah oo aad u khatar badan oo ay tahay inaadan ku kicin duruuf kasta marka ay duufaan dhacdo, waana:
Dhismayaasha leh saqafyo fidsan, ballaaran, sida maqaaxiyo ama jimicsi
Fur qolalka leh dariishado badan
Markay dhaafto, waxaan si taxaddar leh uga bixi doonnaa hoyga oo waxaan wici doonnaa adeegyada gurmadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Khayraadka » Sida looga badbaado duufaanta